Mucaaradka Suuriya oo ogolaaday in ay ka qeyb galaan wadahadalada Geneva | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Mucaaradka Suuriya oo ogolaaday in ay ka qeyb galaan wadahadalada Geneva
Kooxda ugu weyn mucaaradka Suuriya ayaa gaaray magaalada Geneva, maalin kadib marki ay sheegeen in ay qaadacayaan wadahadala la filaayo in ay la bilaabaan dowlada.
Afhayeen u hadlay kooxdan ayaa sheegay in ay wali ku dhaganyihiin mowqifkoodii ahaa in la joojiyo duqeymaha cirka iyo in la qaado xayiraadaha meelaha mucaaradka ka hor inta aysan hor fariisan ergada mataleysa xukumada Bishar Alasad.
Wafdiga ka socda mucaaradka ayaa la kulmi doona wakiilka Qaramada Midoobay Staffan de Mistura maanta.
Kooxdan mucaaradka oo ay taageerto Sacuudiga laguna magacaabo Golaha Wadaxaajoodka ayaa Jimcihii ogolaaday in ay soo xaadiri doonaan wadahadalada Geneva saacado kadib marki ay halkaasi gaareen wafdiga Dowlada Suuriya.
In kabadan 250,000 oo ruux ayaa ku dhimatay 11 milyan oo ruuxna waa ku barakaceen ama waa ay ka carareen guryahooda dagaalka shanta sano ka socda Suuriya kaasoo u dhaxeeya kooxo mucaarad ah oo u badan Islaamiyiin iyo Dowlada uu madaxda ka yahay Bishar Al Asad.